BitDefender Antivirus Plus 2012 (x86/x64) ( Activation ) ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Antivirus Softwares » BitDefender Antivirus Plus 2012 (x86/x64) ( Activation )
BitDefender Antivirus Plus 2012 (x86/x64) ( Activation )
By နေမင်းမောင်1:21 AM9 comments
ကျွန်တော် အခု Antivirus ကို BitDefender အသုံးပြု သူတွေအတွက် 2012 Version လေး တင်ပေး လိုက်ပါတယ် .. အသုံးပြု ရတာတော့ နည်းနည်း ရှုပ်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် အများစုက ဒီကောင်ကို Security ပိုပြီး စိတ်ချရတယ် ဆိုပြီး အသုံးပြု ကြပါတယ် .. ကျွန်တော် ဒီကောင်လေးအတွက် Keygen File ထဲမှာ (12851 days) အထိ သုံးလို့ရမဲ့ Crack File ရယ် Keygen ရယ် အသုံးပြုလို့ရမဲ့ Key တွေပါပါတယ် .. Crack File ကို ဘယ်လို Install လုပ်ရမယ် ဆိုတာကို အထဲမှာလည်း Notepad နဲ့ ရေးပေးထားပါတယ် .. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အောက်မှာ Crack အသုံးပြုနည်းကို ရေးပေးပါမယ် ..
အရင်ဆုံး BitDefender Antivirus ကို မိမိတို့ ကွန်ပျူတာမှာ Install လုပ်လိုက်ပါ .. ပြီးရင် Antivirus Protection ကို Disable ပေးထား လိုက်ပါ .. ပြီးရင် မိမိတို့ ကွန်ပျူတာကို Restart ချလိုက်ပါ .. ပြီးရင် Keyboard မှ F8 Key ကို နှိပ်ထားလိုက်ပါ .. ပြီးရင် Safe mode ထဲကို သွားလိုက်ပါ .. Safe Mode ထဲကို ရောက်ပြီ ဆိုရင် Box_BD2011.exe ကို Run လိုက်ပါ .. ပြီးရင် Year 2045 ကိုနှိပ်လိုက်ပါ .. ပြီးရင် ကွန်ပျုတာကို Restart ပြန်ချပေးလိုက်ပါ .. ပြီးရင် ပုံမှန်အတိုင်း Windows ပြန်တက်လိုက်ပါ .. ဒါဆိုရင်တော့ BitDefender Antivirus ကို License ဖြင့် (12851 days) အသုံးပြုလို့ ရသွားပါလိမ့်မယ် ..
လိုအပ်တဲ့ သူတွေကတော့ အောက်မှာ မိမိတို့ရဲ့ Windows အမျိုးအစား အလိုက် ဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ .. Keygen File ကို သက်သက် တင်ပေးထားပါတယ် ..
Download BitDefender Antivirus For ( 32 Bits )
Download BitDefender Antivirus For ( 64 Bits )
nyinyi April 25, 2012 at 5:42 PM
bro...not working ur key file..pls reload ......
နေမင်းမောင် April 25, 2012 at 10:04 PM
ကျွန်တော် လက်ရှိဒီကောင်လေးကိုသုံးနေတာပါ .. ကျွန်တော် ရေးပေးထားတဲ့ Crack file အသုံးပြုနည်း အတိုင်း လုပ်ကြည့်လိုက်ပါလားခင်ဗျာ ..
Bro... If I want to uninstall BitDefender that already used crack to2045,what should I do first?
min April 28, 2012 at 1:33 PM
ကိုနေမင်းမောင်ရေ တစ်ခုလောက် ကူညီပေးပါလား အကိုရေ။ ကျွန်တော်က BitDefender Internet Security 2012 ကိုတင်လိုက်တာ အခု 654 days left ဖြစ်နေပေမယ့် သုံးလို့မရတော့ပါဘူး။ The Bitdefender License key has expired ဖြစ်နေပါတယ်။ Buy Now ရယ် Register Now ရယ်ပေါ်နေပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရင် အဆင်ပြေမယ်ဆိုတာကို ပြောပြပေးပါနော်။
စောမြင့်ဦး May 1, 2012 at 9:45 PM
အစ်ကိုကျွန်တော်ကိုကူညီပေပါဦးကျွန်တော်ဒီကောင်းလေကိုဒေါင်းပြိးတော့ရမ်းလိုက်တော့သူကပါတ်ဝေါ့နဲ့နာမည်တောင်နေပါတဲ့အစ်ကိုပြောတဲ့Keygen Fileဒေါင်းပြီးဖွင့်ကြည်လိုက်တော့ကျွန်တော်Notepadမှာ ²†í #ÔCL‡íÆ‘É ðòÁïˆdÛZÔK6´'Fo9ý–nñ 1†a €¬„ƒN±ဒါမျိုးတွေဘယ်ပေါ်နေလိုsawmyitoo@ကျွန်တော်အကောင့်မှနာမည်နဲပါတ်ဝေါ့ကိုဖြစ်နိုင်ရင်ကျေးဇူပြုပြီးပို့ပေပါလာဗျာ
ꨅꨯꨤးꨁိူဝ်းꨓုမ်ꨲ May 4, 2012 at 2:32 PM
ကျွန်တော် ၀င်းတိုးxp သုံးပါတယ် ဘယ်ဟာကို ယူမလဲ အစ်ကို
Anonymous June 4, 2012 at 10:31 AM
ကိုမျိုး June 4, 2012 at 8:00 PM
ဒေါင်း ပြီး အင်စတော လုပ်ပြီးပါပြီ.. လိုင်စင်လည်း ၁၂၄၇၀ ရက် ရပါတယ်..တစ်ခုမေးချင်ပါတယ်.. Auto Update ကို မပိတ်ပဲ ထားရမလား.. ဒါမှမဟုတ် ပိတ်ထားပြီး OFFLINE Update လုပ်နည်းနဲ့ပဲ လုပ်ရမလား သိချင်ပါတယ်.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ..။
seesar January 22, 2013 at 7:23 AM
CCleaner Slim 3.18.707 Portable
Your Uninstaller! 7.4.2012.05 (28.04.2012)
Home Doctor,2edition
Aurora 3D Text & Logo Maker 12.04.27
Free Alarm Clock 2.7 + Portable
Driver Checker 2.7.5 Datecode.27.04.2012
Pointstone System Cleaner 6.02.30
Remove Logo Now! from Video v1.1
Skype မှာ မြန်မာဖောင့် ပေါ်ချင်တယ် ဆိုရင်
BitDefender Antivirus Plus 2012 (x86/x64) ( Activ...
Antivirus Uninstaller Tool Pack
Cafezee Software အသုံးပြုနည်း ( E-Book )
Cafezee 3.9 + Crack
Aleo Flash Intro and Banner Maker V 3.8
Splash Pro HD Movie Player
VLC Player 2.00
Avast Pro Antivirus 7.0.1476 + Crack ( 1/14/2050 )...
လွယ်ကူလေ့လာ အခြေခံကွန်ပျူတာ ( E-Book )
CPU နည်းပညာနှင့် မျိုးဆက်သစ် ပရိုဆက်ဆာ ( E-Book )
A + စံပြမေးခွန်း ၊ အဖြေများနှင့် ရှင်းလင်းချက်များ...
အခမဲ့ Websites များ ရေးတင်နည်း ( E-Book )
A BASIC ENGLISH GRAMMER ( U THEIN LWIN )
Internet Download Manager 6.11 Beta Build3+ Patc...
Google_Earth_Pro_6.0.0.1735 + Patch
အဆင့်မြင့် အင်တာနက် အသုံးပြုနည်း
နေ့စဉ်သုံး အင်တာနက် ( E-Book )
အင်တာနက် အသုံးပြုသူများ အတွက် သတိပေးချက် ( ၈ ) ချက...
Sky Net Line ကြည့်ချင်သူများ အတွက်
Photo from eu2010.es အဲ့တုန်းက - (...